बीबीसीदेखि विश्वका प्रमुख मिडिया वेबसाइटको सेवा अवरुद्ध - नेपालबहस
बीबीसीदेखि विश्वका प्रमुख मिडिया वेबसाइटको सेवा अवरुद्ध
| १७:३७:२५ मा प्रकाशित
२५ जेठ, एजेन्सी । बीबीसी सेवादेखि विश्वका प्रमुख मिडिया वेबसाइटको सेवा मंगलबार अवरुद्ध भएको छ । आज केही बेर फाइनान्सियल टाइम्स, न्युयोर्क टाइम्स र ब्लूमवर्ग न्युजको वेबसाइट सेवा अवरुद्ध बन्न पुगेको हो ।
सीएनएन र फ्रान्सको ले मोन्डेको सेवामा पनि केही ‘त्रुटि’ देखिएको छ । त्यस्तै अमेजन डटकमको सेवा पनि अवरुद्ध बनेको थियो । अमेजनले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
बेलायतको गार्डिजन पत्रिकाले आफ्नो वेबसाइट र एप प्रभावित बनेको बताएको छ । अन्य केही बेलायती मिडिया वेबसाइटमा पनि समस्या देखिएको छ । बेलायत सरकारको प्रमुख वेबसाइटको सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ ।
बीबीसीका अनुसार उसका अन्य आउटलेटहरुमा समस्या भएको छ। त्यस्तै अलजजीराका अनुसार उसका केही सब-होस्टिङमा समस्या देखिएको छ भने मुख्य पृष्ठ भर्खरै खुलेको छ।
ठूलो व्यापारिक वेबसाइट अमेजन डटकम कुनै ठाउँमा खुल्ने र कुनै ठाउँमा नखुल्ने समस्या देखिएको छ। उसले आफ्नो साइटको समस्याबारे केही बताएको छैन। बेलायतको गार्डियन अखबारले आफ्नो साइटमा पनि समस्या देखिएको बताएको छ।
बाख्रा पकेट क्षेत्र: कृषकलाई २० हजारका दरले खोर सुधार ! ९ घण्टा पहिले
नागरिक लगानी कोषको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन १६ घण्टा पहिले
महाकाली अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदै ४ दिन पहिले
पहिरोका कारण पर्वत–बागलुङ खण्ड गए रातिदेखि अवरुद्ध ७ दिन पहिले
विश्व हिन्दु परिषद नेपालद्धारा पर्साको मठमन्दिरमा राहत वितरण २ दिन पहिले
इजलाश परिवर्तन भएन, पुरानै न्यायाधीशबाट सुनुवाइ ३ हप्ता पहिले
उज्वल थापा: परिचय, राजनीतिक लाईन र चर्चा ! २ हप्ता पहिले
किन युवती पाका उमेरका पुरुष छान्छन् ? ६ दिन पहिले
एम्बुलेन्स खरिदका लागि आर्थिक सहयोग १ हप्ता पहिले
सीइबीडी हाइड्रोको शेयरमूल्यमा गिरावट, प्रतिशेयरमूल्य कति ? २ दिन पहिले
कैलालीबाट लागुऔषधसहित तीन पक्राउ २ हप्ता पहिले
जोखिम यथावत् रहँदा किसानलाई बर्खे धान खेती गर्न भ्याइनभ्याइ ३ हप्ता पहिले
कर्णालीका २१४ सङ्क्रमित स्वास्थ्यलाभ गरी घर फर्के १२ महिना पहिले
एसएसपी सौरभ राणाले गरे आत्मसमर्पण १ वर्ष पहिले
चुरे क्षेत्र निर्माण परियोजनालाई चार अर्ब ६८ करोड बढी अनुदान १ वर्ष पहिले
श्रमिक बरणबिना श्रीपञ्चमी मनाउँदै किसान ४ महिना पहिले